Salazalahy Tsianihy : famerenana ny Filoha Ravalomanana ny amnistia – MyDago.com aime Madagascar
Ao anatin’ny fivoriana tsy ara-potoana handinihana ny volavolan-dalàna mikasika ny famontsran-keloka ankehitriny ireo parlemantera roa tonta. Ho henjana ny adihevitra momba izany ho an’ireo mpanao politika. Ny avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana dia efa naanome toky ny vahoaka fa hiady hatramin’ny farany mikasika ny famontsoran-keloka. Tsy foana akory anefa ny hetsika eny an-kianja fa mitohy hatrany, ary misy ny fandaminana ho an’ireo mpikambana ao amin’ny CT sy CST, mifandimby mankeny an-kianjan’ny Magro. Toy ny mahazatra dia nisy ny fandraisam-pitenenana nataon’ireo mpitarika teny an-toerana. Amin’ny ankapobeny dia saika nanisy resaka ny mikasika io famontsoran-keloka io avokoa ireo nandray fitenenana rehetra.
Ny CT Sazalahy Tsianihy avy Toliary, dia nanambara fa ny amnistia alefa any amin’ny CTsy CST dia famerenana ny Filoha Ravalomanana haingana.Misy ny mieritreritra fa izay namono olona dia tsy mahazo amnistia. Izao anefa no lazaiko antsika fa na any Asie na Eoropa, rehefa manao toetra tsy mendrika dia tsaraina avokoa n’aiza n’aiza toerana misy azy. Ny Filoha Ravalomanana anefa na any Asie na Eoropa dia mitaky ny hiverenany eto an-tanindrazany. Tsy marina fa io aminstia io dia hanasaziana an’i Dada. Fantantsika tsara fa ny fihetsiketsehana teny amin’ny Bani sy Fign dia fitakiana ny fialan-dRajoelina. Matahotra anefa izy ireo hanome aministia. Tsymaintsy ampidirina ahazo izany anefa ireo voakasika tamin’ireny raharaha ireny. Ny Malagasy nifidy azy no mitaky ny hamerenana azy ka izay no mahatonga antsika hifidy azy ary ilain’ny vahoaka izy. Ny zavanisy teto amin’ny firenena dia nisy ny fandrobana sy famakiana ny fananam-bahoaka izay nataon-dRajoelina sy christine. Nisy mpiasa tao amin’ny Rnm sy Tvm fa mbola tsy diovina io trano may io fa atahoran’ireo nandoro azy mbola hisy faty. Namafisiny fa tsy maintsy miverina ny Filoha Ravalomanana.
Précédent Article précédent : Nifamory ny Ct sy CST Ankolafy Ravalomanana !
Suivant Article suivant : Lahatenin-dRAKOTOARIVELO Mamy, filohan’ny kongresin’ny tetezamita